"Ronaldo Goosha Marka La Joogo Waa Dilaa" - Buffon %
ItalyLatest Sports News
Isagoo la qabsaday qaab ciyaareedka cusub ee jirkiisa iyo da’diisa ayaa waxaa uu muujiyay inuu yahay ciyaaryahan Caqli badan Cristiano Ronaldo, sida uu aaminsan yahay Goolhayaha Juventus, wiilka lagu magacaabo Gianluigi Buffon.
Labadaan laacib ayaa waxay isku diyaarinayaa inay isaga hor yimaadaan kulan ka tirsan Sideed dhamaadka Champions League, xili shabaq-illaaliyaahan reer Italy uu si ka bad-badis ah uu amaan raaxada ugu qaaday xidiga Real Madrid.
“Waqti walba [Ronaldo] wuxuu bartay sida uu uhormariyo ciyaartoynimadiisa,” – Buffon ku sheegay wareysi uu siiyay kooxdiisa – Isagoona sii daba dhigay: “Ka ciyaaryahan ahaan, wuxuu ku bixiyay tamar badan waana xishmeynayaa wax walba oo uu horey usoo sameeyay.
“Waxaan qirsanahay isaga wax badan, maxaa yeelay waa shaqsi wax tar leh, caqli ayuu ku sameeyaa wax walba uu sameynayo iyo walba oo uu sameynayo.
“Waxaan umaleynayaa in sanadihii udambeeyay uu muujiyay inuu yahay mid aad u caqli badan, maxaa yeelay wuxuu bedalay qaabka uu udheelayo.
“Waa mid sidoo kale halis ah, wax walba wuxuu ku sameeyaa 100 boqol, marka la joogo goosha wuxuu yahay mid dilaa ah.
Dhanka kale, Buffon ayaa wuxuu ka adlay sida uu isaga gaar ah ugu noqday shabaqa ilaalinta hal koox iyo heerka uu ka gaaray marka loo eego labadii jiil ee ka dambeysay sida Petr Cech iyo xidigii hore ee Real Madrid, wiilka lagu magacaabo Iker Casillas.
“Casillas, Cech iyo aniga waxaan ahay saddexda goolhaye ee waqti badan ciyaareysa, laga soo bilaabo Banoonigii hore iyo sidoo kale midkaan casriga ah,” ayuu sii daba dhigay kabtanka xulka qaranka Talyaaniga iyo Juventus.
“Tani waa amaanta uu u qalmo Casillas ee saxda ah taasoo aan siinayo isaga,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Gianluigi Buffon, shabaq-ilaaliyaha taariikhda kubada cagta casriga ah ugu wanaagsan marka laga tago kuwii horey usoo maray bahda cayaaraha.